October 24, 2021 – Barnyar Barnyar
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ဇွဲကပင်တောင် (အရှေ့ပိုးကရင်: လါင့်ခွဲါက်ၜင်) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော တောင်ဖြစ်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၃၇၂ ပေမြင့်ပြီး ဘားအံမြို့၏ တောင်ဘက် ၇ မိုင်ခန့်အကွာ ခလောက်နို့ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ဇွဲကပင်တောင်သို့ တက်ရန်နှင့် ဆင်းရန်အတွက် နေရာ (၂)…
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် State ကျောင်းတုန်းက….. ကြောက်လဲကြောက် ချစ်လဲချစ်ရတဲ့… ဆရာမ တစ်ယောက်တော့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်…. အဲ့တုန်းက ဆရာမရာထူးက… အလယ်တန်းပြပဲ ရှိသေးတယ်.. (၈) တန်း ရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမပေါ့ သူမက math (သင်ချာ) ဘာသာကိုပဲ အမြဲသင်တဲ့ ဆရာမပါ…. ဆရာမနဲ့ မသင်ဖူးသေးပေမဲ့.. အကိုတွေ အမတွေရဲ့…
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ ကိုရင်လေးပုံလေးတွေ မျှဝေပါတယ်… မိခင်ရဲ့ စွန့်ပစ်မှုခံရပေမယ့် ဆွမ်းမဘုဉ်းပေးခင် မိခင်အတွက် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ကိုရင်လေး အသက်ပင်ငယ်သော်ငြား သာသနာ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး ဆွမ်းစားရာမှာလည်း ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်း မဘုဉ်းပေးခင် ဆုတောင်းပေးနေတာပါ ကွမ်ရင်လေးဟာဆိုရငါောတ့ မိဘရဲ့ စွနါပစ်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်ဆွမ်းအလှူရှင် ဒကာဒကာမတို့လည်း ကုသိုလ်ရပါတယ် ကိုရင်လေးရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်…
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံ ဖူးမျှော်ရန် လာရောက်ကြသော နတ် ဗြဟ္မာများ
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသုဝဏ္ဏသျှမ်တောင်တော်မြတ် တွင်သီတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလ( ၁၃၅၇ )ခုနှစ်ကဖြစ်သည်။ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်ငွေက အောက်ပါအတိုင်းအားပါးတရပြောဆိုခဲ့၏။ တစ်ရက် ကျွန်တော် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခြေထောက်အနာ ဆေးထည့်ပေးဖို့တောင်ပေါ်ကိုလာတဲ့အခါ ~သာစည်က ကိုရန်လင်းတို့အဖွဲ့လည်းရောက်နေကြတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖူးမျှော်လို့မဝတော့ညသန်းခေါင်အထိ မပြန်နိုင်ကြသေးဘူး။”ဒေါက်” “ဒေါက် ” “ဒေါက်””အဲဒီအချိန်မှာ တံခါးခေါက်သံ အတိုင်းသားကြားရတယ် lဒီအချိန်ကြီးဘယ်သူမှ မလာပါဘူးလေဆိုပြီး ပေထိုင်နေတြတယ်ပေါ့ဗျာ””ဒေါက်”…